Kungakanani Ukukhangisa Kwe-Digital Kuncike ku-SEO?
Wake wazibuza ukuthi i-SEO ithinta kanjani iziteshi zokumaketha zedijithali? Awutholanga impendulo ecacile okwamanje? Azikho izinkinga. Namuhla, sizokuchazela ngokuningiliziwe ukuthi ukumaketha kwewebhu kuncike ekusebenziseni injini yokusesha.
Njengoba kungenzeka ukwazi kakade, i-SEO ishintshile kakhulu eminyakeni embalwa edlule. Yashintsha futhi yahamba kakhulu kunezinguquko ezingakalungi nezokudala zokugxilisa igama elingukhiye ezaziwa kakhulu phakathi nawo-1990. Ngo-2005, ngisho namabhizinisi amancane kanye nokuqala kwaqala ukuqasha ama-export export SEO athembisa ukuthi bazosiza ukwandisa izimoto nokuthengisa.
Akunakuphika ukuthi ngo-2017 i-SEO isaqhubeka indima ebalulekile ekukhuthazeni amabhizinisi e-intanethi. Amasu okucinga nge-injini yokusesha aletha imiphumela ephakeme kakhulu uma isebenza ngendlela efanele. Ngakho-ke, ake sijule kulokhu sihloko futhi sibone ukuthi ukumaketha kwedijithali kuncike ku-SEO.
Okuyisisekelo se-SEO Ukubambisana kumaqembu we-Web Marketing
Lezi zinsuku, iningi labathengisi be-intanethi nabaqambi bewebhu bafaka amaqhinga we-SEO asemqoka kuhlelo lwawo lwe-digital. Lokhu kwenzeka ngoba izindlela ze-SEO zanamuhla zigcwele futhi zihlanganisiwe kunanini ngaphambili. Ihlangana ngokuphumelelayo nezinye iziyalo zokumaketha ngosuku lwesimanje. Nazi ezinye zalezi ziyalo:
Isu Lokuqukethwe: Okuqukethwe yinkosi, i-SEO assets, ithuluzi elinamandla - yibize noma yini oyithandayo. Kuyinto engenakuphikwa ukuthi ingxenye enkulu yesabelomali se-SEO incike ekudalweni kokuqukethwe. Ukusebenzisa isu lokuqukethwe okuphumelelayo kanye ne-SEO kungakhuthukisa ngokushesha ukuguquguquka kuphela kodwa futhi nokuthembeka kwe-brand.
I-Social Media Marketing: Kunconywa kakhulu ukuhlanganisa uhlelo lwakho lwezokuxhumana nabantu ngecebo lakho le-SEO ukufeza inzuzo ephelele yezinzuzo ze-SEO. Amasheya ezenhlalakahle aphelele ekuletheleni izixhumi zemvelo emithonjeni yakho. Ngaphezu kwalokho, babonisa ukuthi isu lakho lokuqukethwe lisebenza kahle noma lidinga ukubuyekezwa.
Ukusesha okukhokhelwayo: Ngokuxuba i-Google Analytics ne-SEO, ungakwazi ukubhekana namagama angukhiye abizayo, ngaleyo ndlela uthole ithrafikhi ephilayo. Amathimba wokusesha akhokhelwayo angabambisana namaqembu we-SEO ngokuthuthukisa izinto eziningana, kufaka phakathi izinhlelo zamagama angukhiye, amakhasi okufika, amasu wokuqukethwe okuhlangene futhi umugqa uyaqhubeka.
Ubudlelwane bomphakathi: Ukuphathwa kwedumela loku-inthanethi kuyinye isinyathelo esibalulekile kuhlelo lwakho lwe-SEO. Amathimba we-PR angazuza kakhulu ngokubambisana ne-SEO: ukukhuluma nge-band kungasebenzisa kokubili: ukutholakala kwe-inthanethi nokubonakala kokusesha.
Ukuguqulwa: Ukuhlanganiswa kwamacebo okuguqulwa kanye ne-SEO kungakhuphula imiphumela emibi. Uma ufanisa isipiliyoni somsebenzisi esingcono kakhulu ngohambo lokuqukethwe okulungile, uzoletha abasebenzisi abanelisekile kuwebhusayithi yakho. Cabanga ngokufunda amabalazwe okushisa ukuze uqonde abasebenzisi bakho kangcono. Futhi, hlola i-UI yakho njalo.
Njengoba ubona, i-SEO ibambisana neziyalo eziningi ngaphakathi kokudayiswa kwe-digital.
i-SEO yinto eguqukayo: nsuku zonke sibona amathuba amasha wokusesha. Into engcono kakhulu ongayenza ukuze ufike kude ngokuguqulwa kwakho kuzokucaca futhi icacise ngethimba lakho ledijithali. Bazise ukuthi wenzani, batshele ngezinyathelo zakho ezilandelayo, wabelane ngemibono yakho ye-SEO nabachwepheshe be-digital futhi ubone ukuthi kwenzekani ngenyanga Source . Mhlawumbe, ungathanda imiphumela yokubambisana okunjalo!